စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၀ ) ( ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၀ ) ( ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၀ ) ( ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု )
Posted by Foreign Resident on Feb 5, 2012 in Think Different | 26 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၁၀ )
” Wow ” ရဲ့ ” ဂျင်းနီရယ် မယ်လိုဒီရယ် ဥက္ကဋ္ဌကြီးရယ် ” Post က ဓါတ်ပုံထက်စာရင်
ဒီ ဓါတ်ပုံက ပိုတွေးစရာ များလို့ တွေးကြည့်မိတာပါ ။
အင်း သီချင်း ဆိုခတွေက ဒေါ်လာနှင့် လက်ငင်းရှင်းရတယ် ထင်တယ် ။
အခန်းထဲမှာ သီးသန့် ဆိုကြတာမို့လို့ ကြေးကြီးတာ ဖြစ်ရမယ် ။
ဒေါ်လာ ရာတန်တွေကို အုပ်လိုက်ကိုင်ပြီးကို ရှင်းနေတာ ။
မယ်လိုဒီက ဒေါ်လာ တစ်ရာတန်လေးက ခေါက်နေလို့ ပြန်လဲခိုင်းနေတာလား ။
ဦးဇော်ဇော် နှင့် ဆရာစိုင်း ( Alpine ) က တော်တော် အပေးအကမ်း ရက်ရောပုံ ရတယ် ။
ဂျင်းနီလေးဆို ပျော်နေလိုက်တာ ။
သာဓုပါဗျာ ၊ သာဓုပါ ။
အင်း သူတို့ခမျာ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ရှာမှာပဲ ။
အစိုးရက ငွေစက္ကူ တစ်သိန်းတန်တို့ ၊ တစ်သန်းတန်တို့ ထုတ်မပေးတော့ ၊
မကိုင်ချင်ပဲနှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာကိုပဲ အုပ်လိုက် ကိုင်သုံးနေရရှာတယ် ။
ဦးဇော်ဇော် နှင့် ဆရာစိုင်း ( Alpine ) ကို အပြစ် မမြင်ပါဘူး ။
သူ့ ရှိလို့ သူ သုံးတာပဲနော့် ။ မုဒိတာ ပွားနိုင်ပါတယ် ။
ဒီစကား မှန်ရင် ၊ နောင်ဘဝ ကိုယ်လည်း ဒီလို သုံးနိုင်ပါစေဗျာ ။ ဟီ ဟိ ။
စဉ်းစားမိတာက ၊ မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု စများလာ နေပြီလားလို့ ။
အဘ ထင်တယ် ၊ တချို့ အောက်ခြေဝန်ထမ်းလေးတွေဆိုရင် ၊
တစ်နှစ်လုံး ခြစ်ချုတ်ပြီး စုရင်တောင်မှ ၊
မယ်လိုဒီ ကိုင်ထားတဲ့ ရာတန် တစ်ရွက်စာကိုတောင် စုမိပါ့မလား ။
အကြွေးပြီး အကြွေး ပါတ်နေရရှာတဲ့ ဘဝ တွေလေ ။
သူတို့များ ( ဂျင်းနီ ၊ မယ်လိုဒီ & etc ) ကျတော့ လွယ်ပုံရတယ် ။
အစိုးရမင်းများလည်း ဒီ ဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်မိရင်တော့ ၊
အဘ လိုပဲ အတွေးဝင်မိမယ် ထင်တာပဲ ။
ဒါမှမဟုတ် အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ ပြဿနာ အစတွေ
လိုက်ဆွဲထုတ်နေတဲ့ ပြဿနာ အဘ လို့ပဲ ထင်မလား မသိ ။
မြို့မေတ္တာ ခံယူမယ့် ၊
အဘ F R ။
အဘ မေ့ကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ Sorry ပါ ။
Credit to Myatphone Linn / Face Book / Photo /ေ၇ပေါ်ဆီ ချဉ်ဖတ်များ………ပုံ ( ၂ ) ။
ဟင့် ပုံတင်ချင်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုတင်ပေါ့ ပိန္နဲပင်ကို ဆွဲထဲ့နေရသေးတယ်…
နောက်တာပါ။ မနေ့က ဒီနှစ်ပုံ Facebook မှာ အတော် ပလူပျံသွားတယ်။ အဘဖောပြောသလိုပဲ တွေးမိတာလေးတွေရှိပေမဲ့ အင်းပေါ့လေ ဒီလိုဆိုတော့လဲ ဟိုလိုတော့ရှိတာပေါ့ ဒီအတိုင်းသွားရင်တော့ ဟိုသင်းတွေက ဟိုဟာဆိုသလို…. ဟယ် သိတော့ဝူး
ဒေါ်လှ တစ်ရာတန်လေးတွေရတဲ့ မျက်နှာက သူ့ မေဂျီးဒေါ်ကြီး သေရာက ပြန်ထလာတဲ့အတိုင်းပဲ
ငါဆိုလဲ ဘာမှမလုပ်ရပဲ ဒေါ်လှ တစ်ရာရရင် ဟာ့တ်အတက်ခ်ဖြစ်ပြီး ကိစ္စရှောသွားနိုင်တာပဲ
နာမည်တွေ အရင်သေနှင့်ကြပြီမိုလို့ .စိတ်မကောင်းလှပါကွယ်..
တရာနဲ့ ပဲ ဖြေကြပေါ့
exchange လုပ်နေကြတာလေ။ တဒေါ်လာကို ၁၀၀၀နှုန်းနဲ့ ဒေါ်လာ၁၀၀ကို တစ်သိန်းနဲ့လဲပေးနေတာထင်တယ်။
အောင်မငီး … အူလှိုက်သည်းလှိုက် ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဟို .. လေးယောက်ကို ကြောတာနေမှာ .. ။
ဒီဘက်က ဘူးကြီးတွေ … အဲ .. ယောင်လို့ … အူးကြီးတွေကလည်း အပေးအကမ်း ရက်ရောလိုက်ပုံများ ကြော ကြောချင်ဘူး။ အဲ … အကြံတစ်ခုရပြီ။ အဲဒီ အူးကြီးတွေဆီ ငွေဖလား အကြီးကြီးနဲ့ အလှူသွားခံရမယ် … ဟီ … ဟိ … အဲဒီကြ မလှူလို့ကတော့ သူကြီး တက်တိုင်မယ် … ဒါဗြဲ …
လူတွေ စဉ်းစားကြxxxxx စဉ်းစားကြ လောကအတွက် +++++++ သင်ဟာသမိုင်းကြောင်း ကောင်းဖို့ တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့သလား ………. ။ (ကိုကျော့် လေသံဖြင့် ဖတ်ပါ…။ ) အဘဖောရေ….။ ဘိုင်ကျလို့ ဘေးထိုင်နေရတော့လည်း တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဘုပြောဖြစ်တယ်ဗျ….။
မလွယ်ပါဘူး.. အဘရယ်.. လွယ်ပါဘူး..
ဟနေတာတော့ တော်တော်လေး ဟနေတာပါဗျာ..
ကျနော် အရင်ကလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်… နာမည်ကြီး မော်ဒယ်တွေ
အဆိုတော်တွေဟာ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ အမြှောင်သာသာဖြစ်နေပါတယ်…
အခုနာမည်ကြီးချင်သူတော်တော်များများကလည်း အဲ့လမ်းကို လိုက်ချင်လို့
ပိုက်ဆံအကုန်ခံ စီးရီးထုတ်၊ ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး လူကြော်ငြာနေတယ်ပဲ… ကျနော်တော့
မြင်ပါတယ် အဘရယ်… အင်း.. အင်း..
ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးနေတော့မယ်.. ထင်ပါတော့တယ်.. အဘရယ်…
ပိုက်ဆံရှိတာချင်းတူပေမယ့် ပိုက်ဆံကို တန်ဘိုးထားပုံချင်း
အင်း…. ပိုက်ဆံရှာရပုံချင်းလဲ မတူကြပဲကိုး…….
ရွာသူားတို့ရေ ရာတန် က တရွက် နှစ်ရွက် မဟုတ်ဘူးနော် ။
ခရမ်းရောင် ကောင်မလေး ကိုင်ထားတဲ့
ပုံရဲ့ ဘယ်ဖက် အစွန်ဆုံးက ပိုက်ဆံအုပ်က ဒေါ်လာအုပ်နော် ။
အဘ အထင်တော့ မယ်လိုဒီ မိုက်ကရိုဖုန်း နှင့် တွဲကိုင်ထားတဲ့
မြန်မာ ပိုက်ဆံအုပ် တစ်အုပ်ကလွဲရင် ကျန်တာ ဒေါ်လာအုပ်တွေ ကြီးပဲ ။
captainamerica အပေါ်မှာ မန့်ခဲ့သလိုပဲ
မထင်ရှားတဲ့ Celebrity မဟုတ်တဲ့ လူငယ် သူဋ္ဌေး တစ်ယောက်က
မထင်ရှားတဲ့ Celebrity မဟုတ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် စင်တင်က အဆိုတော် တစ်ယောက်ကို
တစ်ညတည်းကို သိန်း နှစ်ရာဖိုး ပန်းကုံး စွပ်တယ်ဆိုတော့
Celebrity သူဋ္ဌေးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဦးဇော်ဇော် နှင့် ဆရာစိုင်း ( Alpine ) တို့က
Celebrity ဂျင်းနီ ၊ မယ်လိုဒီ တို့ကို ဆုချတာဆိုတော့ ?????
အင်းးးးးး Australia, America, UK, Japan စသဖြင့်မှာ နေနေကြရတဲ့ လူမွဲလေးတွေ မှာတော့
နောင်ဘဝမှပဲ သူတို့လို ကံကောင်းဖို့ ဆုတောင်း ရတော့မယ် ။
ဝန်ခံပါတယ် ။ သြဇီမှာနေတဲ့ လူမွဲလေး အဘ F R ပါ ။
အဘဖော သူတို့ကိုတိုင်းပြည်အကြွေးအရင်ဆပ်ခိုင်းလိုက်မယ်။ ဘယ့်နှယ့်လဲ။
ကျွန်မတော့ နှစ်မျိုး တွေးမိတယ်။
(၁) အဲဒါ တစ်ဒေါ်လာ တန် တွေ ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
(၂) မဟုတ်ဘဲ ရာတန် တွေ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ချွေးနဲစာလေးနဲ့ သမာအာဇီဝ ရလာတဲ့ ငွေ တွေတော့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင် ဟု ထင်ပါကြောင်း။
အဲဒါ ကျောင်းတက်ခွင့် မရတဲ့ ခလေးတွေ၊ ဆေးကုခွင့် မရလို့ အသက်မဆုံးသင့်ဘဲ ဆုံး ခဲ့ရတဲ့ ကျေးရွာကလူတွေ ရဲ့ ပိုင်သင့်တဲ့ ငွေတွေ အခွင့်အရေး တွေ၊ ပြည်သူ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို သုံးနေတာ။
တနည်း အဲဒါ မိုနိုပိုလီ ပိုက်ဆံတွေ။
မဖြစ်နိုင်ဘူး တစ်ဒေါ်လာတန် အုပ်ဆိုလို့ကတော့
သူတို့လို Celebrity သူဋ္ဌေးကြီးတွေ မပြောနှင့်
ကျွန်တော့်လို ငမွဲတောင် လက်အလေးခံ ၊ သိက္ခာအကျခံပြီး မကိုင်ဘူး ။
မ Khin Latt ရေ မြန်မာပြည်က သူဋ္ဌေးကြီးတွေ အရမ်းချမ်းသာ နေပြီနော် ။
နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ မြန်မာတွေ ဘယ်လိုမှ မမှန်းရဲ စိတ်ကူး မယဉ်ရဲ လောက်အောင် ချမ်းသာပါတယ် ။
အပေါ်မှာ captainamerica မန့်ခဲ့သလိုပဲ
တစ်ညတည်းကို သိန်း နှစ်ရာဖိုး ပန်းကုံး စွပ်တယ်ဆိုတာ ။
သူတို့ပိုက်ဆံတွေ သန့်မသန့်တော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး ။
အရင်ဘဝကဒါနကောင်းခဲ့သူတွေ သုံးကြပါ ဖြုန်းကြပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ လထဲက ပွဲ တစ်ခုကို မျက်စေ့လည်ပြီး ရောက်သွားခဲ့တယ်
ဒေါ်လာတွေ အုပ်လိုက်ကိုင် ဆုချနေတာ
အားကျရမှာလား ၊စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာလား၊ မုဒိတာ ပွားရမှာလား မသိ
အနားရောက်လာလို့ ကြည့်မိတာတော့ ဒေါ်လာ ၂၀ တန် အုပ်လိုက်ပါ
အရင်းရှင်ငွေရှင်တွေကို ..အားပေးပါ..။ သူတို့တွေ နံရံတွေထဲငွေတွေမမြုတ်ထား..ရွေတွေမ၀ယ်ထား.ရင်ကို မဆိုးပါဘူး..
… နိုင်ငံတကာလှည့်မသုံးပဲ..ပြည်တွင်းသုံးပေးတာကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ..။
သူတို့က.. ဒီမိုကေ၇စီစံနစ်မှာ ..အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေမှာ.. အဓိကမောင်းနှင်အားတွေပေါ့…။
We are the 99% ငါတို့သည် ၉၉ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး…
Hope those money can be pure like Alpine…
ဇော်ဇော်(max) နဲ့ အဖွဲ့ကို မော်ဒယ်လေးတွေ ပန်းဦးဆက်ရတယ် ဆိုတဲ့စကား
တစ်လောက………… တက္ကစီ သမားတစ်ယောက် ပြောတာကြားရပါတယ်။
ကိုယ့်အရေးကြီးစာရွက်တွေ အဲဒီကားပေါ် ကျန်ခဲ့တဲ့ အထိ။
သူ့ဆိုင်းနဲ့သူ့ဇတ်ပေါ့ဗျာ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းဝင်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလို သုံးဖြုန်းနေတာကိုဒေါ့ အံ့ဩမိတာအမှန်ပဲ (ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ အမေစုဒို့နဲ့ကွာပါ့)အထင်ကြီးစရာမရှိမိပါဗျာ
ပိုက်ဆံမှင်စိုလို့ လား၊လက်ရိုးကျိုးနေလို့ လား ပြန်လဲခိုင်းနေတယ်ထင်တယ်။
လေးယောက်တောင်နော်။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လည်း ရမှာပါပဲ။
ဂျင်းနီလေးကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ၃၈ဖြာမင်္ဂလာတရားတောတွေကို သရုပ်ဖော်တဲ့ ဇာတ်တွေမှာ သရုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ဖူးတော့…
သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဟောဖူးတဲ့ ယောင်းမလို လူနဲ့၊ လျှာလိုလူဆိုတာကို သွားသတိရမိတယ်။
လုပ်ကြပါ စားကြပါ ပျော်ကြပါ ပါးကြပါ
ငါတို့ကတော့ ဒီမှာ ပိုက်ဆံလေး လေးငါးထောင်ရဖို့အရေး
ဇော်ဇော်ကပေးချင်နေတာကို ဦးစိုင်းကနှမျှောလို့ ဖမ်းတားတာလားမသိ….နေပါဥိးကွ..နေပါဦးကွ.. ငါရေပရစေဦး…..ဆိုပြီး..ဟီဟိ…ဦးစိုင်း အသက်ကြီးပြီ ၊အပျော်အပါးလေးလျှော့ပါဦး… အဲဒီပိုက်ဆံတွေကချင်ကိုလှူလိုက်ပါလား….
နယ်က ရန်ကုန်လာအလုပ်လုပ်တဲ့ အနိမ့်ဆုံးဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့လစာနဲ့သင်္ကြန်ရုံးရက်ရှည် မှာနယ်ပြန်ဘို့ကား၊ရထားခအသွားအပြန်စရိတ်အတွက်အမောက ဒီပုံထဲကလူတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလိုပဲ။